स्वास्थ्य Archives - Lokpati.com
Tag - स्वास्थ्य
बनेपा, ९ कात्तिक। बनेपा नगरपालिका ५ को आयोजना तथा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा वडाभित्रका २३३ ज्येष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ।
राष्ट्रिय आरोग्य दिवस तथा धन्वन्तरि जयन्तीको...
काठमाडौं, १७ भदौ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘मिर्गौलासम्बन्धी एन्टिबडी’ को उपचारकाक्रममा छैटौंपटक प्लाज्माफेरेसिस गरिएको छ।
१२ वर्ष अघि डिल्लीस्थित इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका...
‘मासु यसरी खानुस्, जसले शरीरलाई खास हानी गर्दैन’
काठमाडौं। एउटा जवान मान्छेले एक दिनमा २५० ग्रामसम्म मासु खान राम्रो हुन्छ। मान्छेको एक किलोग्राम तौलका लागि एक ग्राम प्रोटिन आवश्यक हुन्छ। दुई सय ५० ग्राम खसीको मासुमा सरदर ५० देखि ५५ ग्राम प्रोटिन हुन्छ। थप प्रोटिन अन्य...
राती खाली पेट सुत्नुहुन्छ ? जसले निम्त्याउँछ यस्तो समस्या
काठमाडौं। राति खाली पेट सुत्दा शरीरको वजन कम हुन मद्दत पुग्छ। कतिपय बढी वजन भएका मानिस यही कारण पनि राति केही पनि नखाई सुत्न रुचाउँछन्। तर, चिकित्सक अनुसन्धानकर्ताहरुले यो आदत हानिकारक हुन सक्ने पत्ता लगाएका छन्।
सुत्न नजान्दा हृदयघात, सुगर र प्रेसर हुन्छ : डा. कोइराला
काठमाडौं। अहिले मानिस धेरै नै व्यस्त रहने भएको हुँदा स्वास्थ्यको चिन्तालाई ख्याल गर्न सक्दैन। सुत्ने, खानपान लगायतका कुराहरुमा अहिले धेरैले ख्याल गर्दैनन्। अहिले खापान र आरामका कारणले गर्दा धेरै बिरामी हुँदै आएका छन्।...
‘सावधान ! एनर्जी ड्रिंकले तपाईंको ज्यानै लिन सक्छ’
काठमाडौं। यदि तपाईं पनि तत्काल इनर्जी पाउनका लागि एनर्जी ड्रिंक पिउनुहुन्छ भने सावधान हुनुस्। एनर्जी ड्रिङ्कले तपाईंको स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्याउँछ। एनर्जी ड्रिङ्कले हाम्रो स्वास्थ्यलाई पुर्याउने ६ वटा नोक्सानको...
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री अस्पताल भर्ना, कस्ताे छ उनकाे स्वास्थ्य ?
काठमाडौं, २० जेठ। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल अस्पताल भर्ना भएका छन्। नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भन्दै गएका पौडेल शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग निवारण केन्द्रमा भर्ना भएका...
डण्डीफोर आएर हैरान हुनुहुन्छ? यसरी छुटकारा पाउनुस् (आठ टिप्स्)
काठमाडौं। धेरै युवा युवती डण्डीफोरकाे समस्याले पिडित भएका हुन्छन्। याे छालामा हुने एक प्रकारकाे राेग हाे।सुन्दर र चम्किलो छाला शरीरमा, अनुहारमा वा शरीरका विभिन्न ठाउँमा डण्डीफोर आउने गर्छ।
डण्डीफोर आउने कारण थाहा...
जहाँ पाँच रुपैयाँमै उपचार हुन्छ…
काठमाडौं, १४ वैशाख । बिरामी हुँदा हामी हजारौं लाखौं खर्च गरेर उपचार गराइरहेका हुन्छौं। त्यसमाथि अस्पतालको लामो लाइन अनि औषधीको महंगो बिल उफ्!
तर, वाङ्चुक राप्तेन लामाले विगत तीन वर्षदेखि पाँच रुपैयाँमै बिरामको उपचार गरिरहेका...